Siem Reap dia mandray ny Biz Fair mpizahatany voalohany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Siem Reap dia mandray ny Biz Fair mpizahatany voalohany
Orinasa Kambodziana sy iraisam-pirenena mihoatra ny 70 no nanatevin-daharana ny andro fanokafana ny Biz Fair, izay natomboka tao Siem Reap.
Orinasa Kambodziana sy iraisam-pirenena mihoatra ny 70 no nanatevin-daharana ny andro fanokafana ny Biz Fair, izay nanomboka Siem Reap.
Ny foara - izay sambany vao natao tamin'ity taona ity - dia hatao ihany koa amin'ny faran'ity herinandro ity ao Phnom Penh.
Mikasa ny hamorona fantsom-pivarotana betsaka kokoa ho an'ireo mpilalao eo amin'ny sehatry ny fizahantany ary hampitombo ny isan'ny mpizahatany ao Kambodza mandritra ny vanim-potoana ambany, hoy ny mpikarakara.
Thourn Sinan, filohan'ny Kambodza Chapter of the Pacific Asia Travel Association, dia nilaza fa ny hetsika any Siem Reap, izay hitohy anio, dia nanintona orinasa iraisam-pirenena 40 avy amin'ny firenena 9: Bangladesh, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, China, Singapaoro, ary India.
"Ny tena tanjon'ireny hetsika ireny dia ny hampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny tambajotra eo amin'ny orinasa sy ny orinasa Kambodziana any Asean sy ny faritra hafa ao Azia Pasifika mba hiarahan'izy ireo miara-maniry sy hahatratra ny fitomboana maharitra," hoy Andriamatoa Sinan.
"Ireo hetsika ireo dia manome ny orinasa vahiny fahafahana hijery an'i Kambodza sy hiara-hiasa amin'ireo mpilalao eo an-toerana izay afaka manampy azy ireo hampisondrotra ny varotra," hoy izy nanampy.
“Amin'ity taona ity, hatao indroa ny foara, ny iray any Phnom Penh ary ny iray ao Siem Reap. Saingy, amin'ny taona ho avy, mikasa ny hanao foara efatra izahay - roa isaky ny tanàna, "hoy Andriamatoa Sinan nanampy.
Nambarany fa raha misy ny fanampiana ampy avy amin'ireo mpanome tolotra eo an-toerana dia hitarina amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena ny foara, manomboka amin'i Battambang, ny morontsiraka ary ny faritany atsinanana.
Pak Sokhom, sekreteram-panjakana ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany dia nilaza fa fahombiazana lo ny andro voalohany nataon'ny Biz Fair ary nilaza izy fa manantena ny hanaovana izany matetika.
"Te-hisaotra ny Association Pacific Travel Asia Pacific aho tamin'ny fampiantranoana ny Biz Fair voalohany an'i Siem Reap, ary tiako ny hangataka amin'izy ireo mba hanao ny hetsika isan-taona satria sehatra tsara indrindra hampiroboroboana ny tolotra fizahan-tany any Kambodza io," hoy Andriamatoa Sokhom.
Mpizahatany iraisam-pirenena efa ho 5.6 tapitrisa no nitsidika ilay Fanjakana tamin'ny taon-dasa, 11.8 isan-jato mahery noho ny tamin'ny 2016. mpitsidika 4.3 tapitrisa no tonga avy any Azia Pasifika.
Tamin'ny taona 2017, ny sehatry ny fizahan-tany dia nahitana 13 isan-jaton'ny harin-karena faobe 3.4 miliara dolara, ary namorona asa mivantana 620,000, hoy ny minisiteran'ny fizahantany.
Ny Biz Fair dia atao ao Siem Reap amin'ny 3-4 septambra ary ao Phnom Penh amin'ny 5-6 septambra.
Fampandrosoana fizahan-tany maharitra amin'ny fomba fijery Aziatika atsimo